All Muslims around the world should take action on Qur’an burning by Myanmar Radical Buddhists | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Respect for human rights essential: Carter
Myanmar Government’s response to HRW report of Crimes against Humanity »
All Muslims around the world should take action on Qur’an burning by Myanmar Radical Buddhists
Appealing to world Muslims to take action on the Myanmar Government for failure to control this kind of INSULT on Qur’an and ISLAM.
This is not an INTERNAL AFFAIRS of Myanmar but INSULT on all the Muslims around the world.
Brunei, Indonesia and Malaysian in ASEAN and Muslims in Thailand and Singapore must take action on U Thein Sein‘s government.
OIC must press UN to investigate Myanmar Leaders for failure to take action on this kind of Cyber activities, TERRORIST 969 group and Wira Thu led Extremist Terrorist monks.
I hereby deleted the pic of Quran burning because Pakistan authorities misunderstood and trying or threatening to block my whole blog in Pakistan.
Read the lies of မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ (M.N.M.C)
ကုလားတွေ ဘာလို့ ကိုရမ်ကို အစ/အဆုံး လုံးစေ့ပတ်စေ့ မလေ့လာရသလဲ?? ပြီတော့ ပလီမှာ မော်လဝီဆရာမှလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ကျမ်းကိုမထိရသလဲ? ရှင်းပါတယ် တကယ်လို့ များ သူတို့ ကျမ်းကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ လေ့လာခွင့် မေးမြန်းခွင့် လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါလား ဆရာ ဦးဆန်းလွင်လို လူမျိုးမြန်မာပြည်မှာမြောက်များစွာပေါ်လာပြီး အစ္စလာမ်ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ က အကြောက်တရားနဲ့ ချုပ်ကိုင်တယ် မက်လုံးပေးပြီးမြူဆွယ်တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် တရားတော်မစစ်လို့ ပေါ့။ တရားသာစစ်ပါလား လူသားတိုင်း ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။ တရားအစစ်သာတွေ့ မကိုးကွယ်နဲ့ ပြောလဲ ကိုးကွယ်နေမှာပဲ မယုံနဲ့ ပြောလဲ ယုံကြည်နေမှာပဲလေ။ အေးချမ်းမှု ငြိမ်းအေးမှု အစစ်ကိုရသွားပြီကိုး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ယုံကြည်သက်ဝင်မှကိုးကွယ်ခိုင်းတာပါ။ ပလီမှာ ကုလားတိုင်း ကိုရမ် ကိုင်ခွင့်မရပါ။ ကိုင်ခွင့်ရလို့ လေ့လာမယ်ဆိုလဲ ဆရာကိုယ်တိုင်က မရှင်းပြတတ်ပါ။ ဒီတော့ ဘာမှန်းမသိ ယောင်ဝါးဝါးကိုသာ ဘုရားရှင်ကယ်တင်နိုးနဲ့ စိတ်ကူးတည်ရာလုပ်နေသောသူများ လို့ သာမြင်မိပါသည်။ တကယ်လို့ များ ကိုရမ်ကို အစ/အဆုံးလဲ လေ့လာတယ်…ကျမ်းပါအတိုင်းလဲ ၁၀၀% လိုက်နာစောင့်ထိန်းတဲ့ ပလီဆရာဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖက်ကို လက်ခံသူ အားပေးသူလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါသည်။ သူ့ ကို လူသတ်မှုဖြစ်အောင်ကြံစည်သူ အကြမ်းဖက် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေသူအဖြစ်တောင် အရေးယူရမလို့ ဖြစ်နေပါပြီ။ မွတ်ဆလင် ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်က သူတို့ ကိုရမ်ဆိုတာ ဘာဆိုတာတောင် မသိဘဲ လက်ခံတာ အံသြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ စစ်မှန်တဲ့ မြတ်သာသနာနဲ့ တွေ့ တာ ကံကောင်းပါတယ်ဗျာ။ခက်ထန်
Tags: Brunei, Indonesia, Islam, Muslim, Myanmar, Organisation of Islamic Cooperation, Qur'an, Singapore, Thein Sein
This entry was posted on April 27, 2013 at 5:12 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “All Muslims around the world should take action on Qur’an burning by Myanmar Radical Buddhists”
All Muslims around the world should take action on Qur’an burning by Myanmar Radical Buddhists | San Oo Aung's Weblog Says:
April 27, 2013 at 7:01 am | Reply
[…] Read more >> […]
Chendana Doll Says:
April 28, 2013 at 2:16 am | Reply
Astagfirullahalazim…..what can’t they accept their differences. If their are true good Buddhist they should know that no religion in the world would accept what they did because i believe all religion thought their people to be good.
April 28, 2013 at 11:59 am | Reply
ကိုခက်ထန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ (M.N.M.C) မှာ ရေးတဲ့
ပို့စ်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီး ဒီ ပြန်စာကို ရေးလိုက်တာပါ။
ကိုခက်ထန်အနေနဲ့ ကုရ်အာန်ကို ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှ လေ့လာပြီးပါသနည်း၊ ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သွားပြီလား ဆိုတာထက် ကိုခက်ထန်ရဲ့ မေးခွန်းများကို ပြန်လည် မဖြေကြားခင်
ကိုခက်ထန်အား ကျောင်းပညာ မည်မျှ အထိ သင်ယူ တတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်သနည်းဆိုသည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုခက်ထန်ရဲ့ မြန်မာစာပေ အရေးအသားနဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက် မဟုတ်မှန်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း သိသာနေလို့ပါ။ အခု ကိုခက်ထန် ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချက်ခြင်းကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းပေးပါ့မယ်။
—– ကုလားတွေ ဘာလို့ ကိုရမ်ကို အစ/အဆုံး လုံးစေ့ပတ်စေ့ မလေ့လာရသလဲ?? ပြီတော့ ပလီမှာ မော်လဝီဆရာမှလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ကျမ်းကိုမထိရသလဲ? ရှင်းပါတယ် တကယ်လို့ များ သူတို့ ကျမ်းကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ လေ့လာခွင့် မေးမြန်းခွင့် လုပ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါလား ဆရာ ဦးဆန်းလွင်လို လူမျိုးမြန်မာပြည်မှာမြောက်များစွာပေါ်လာပြီး အစ္စလာမ်ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာတောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ —–
ဖြေ ။ ။ ဒီမေးခွန်းက မေးခွန်းပုံစံ မကျတဲ့ အပြင် ကိုယ်အသိဥာဏ်နဲပါးစွာနဲ့ သိထားတဲ့ အသိတစ်ခုကို ကိုခက်ထန်ရဲ့ Page ဖြစ်တဲ့ M.N.M.C မှာ ရှိတဲ့ လူတွေကို ဇွတ်အတင်းလက်ခံခိုင်းသလို ရိုက်သွင်းထားတဲ့ ပြောပြပုံဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ ရဲ့ ဥာဏ်ပညာ နည်းပါးမှုကို
ကိုခက်ထန်ရေ … ကုရ်အာန်ဆိုတာ ဗလီမှာပဲ ထားရတဲ့ ပစ္စည်း မဟုတ်တဲ့ အပြင်၊ မော်လ၀ီဆရာ တစ်ယောက်ထဲ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူမဆို ကုရ်အာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည် တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူတွေဆီမှာ မေးမြန်းခွင့်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ အကြင် နားလည် တတ်ကျွမ်းသူ တစ်ယောက်သည် ၄င်းအား လာရောက်မေးမြန်းသော သာသနာရေးရာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သိလျက်နဲ့ တမင် မဖြေဆိုခဲ့သည် ရှိသော်
၄င်းသူအား ကေယာမသ် (နောက်ဆုံးတရားခွင်) နေ့တွင် သံပချုပ်ဖြင့် ရှင်ပြန်ထရမည်ဟု ကျွန်ုတို့ရဲ့ တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (Peace Be Upon Him) မိန့်ကြားတော် မူထားသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အသိပညာတတ်မြောက် ထားသူတစ်ဦးတစ်ယောက် အနေဖြင့် မိမိအား လာရောက်မေးမြန်းသူအား မိမိနားလည်ထားသမျှကို
ပြန်လည် ရှင်းပြရမည်မှာ တာဝန် တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ကိုခက်ထန်အား သိရှိစေအပ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆရာဦးဆန်းလွင်မကလို့ ကြိုက်တဲ့သူ မည်သူမဆို ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နှင့် အစ္စလာမ် သာသနာတော် အကြောင်း ပညာရှင် ဆန်ဆန် ဆွေးနွေးလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ မုစ်လင်မ်များဘက်မှ ၀မ်းမြောက်စွာ နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုခက်ထန်တို့အဖွဲ့အား သိစေအပ်ပါသည်။
—– ဒါကြောင့်သူတို့ က အကြောက်တရားနဲ့ ချုပ်ကိုင်တယ် မက်လုံးပေးပြီးမြူဆွယ်တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် တရားတော်မစစ်လို့ ပေါ့။ တရားသာစစ်ပါလား လူသားတိုင်း ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။ တရားအစစ်သာတွေ့ မကိုးကွယ်နဲ့ ပြောလဲ ကိုးကွယ်နေမှာပဲ မယုံနဲ့ ပြောလဲ ယုံကြည်နေမှာပဲလေ။ အေးချမ်းမှု ငြိမ်းအေးမှု အစစ်ကိုရသွားပြီကိုး။ ——
ဖြေ ။ ။ ကိုခက်ထန် ခင်ဗျား၊ အကြောက်တရားနဲ့ ချုပ်ကိုင်တယ်၊ မက်လုံးပေးပြီး မြူဆွယ်တယ်ဆိုတဲ့
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့ အမိန့် တစ်ခုလောက် ယူခဲ့ပြစမ်းပါ။ ကျနော်တို့ အားလုံး ဘာသာပြောင်း ကိုးကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် လူသားတိုင်းမှာ ဦးနှောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဦးနှောက်ဟာ
သန့်စင်နေရပါမည်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အမြဲတမ်း တွေးတော ဆင်ခြင် နိုင်ရပါ့မယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာ ကောင်းကျိုးပေးမှာပါ။ ကိုခက်ထန် ကုရ်အာန်ကို လေ့လာတာ အစ္စလာမ်ကို အမှားထောက်ဖို့လား၊ တကယ် စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လေ့လာတာလား၊ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလား၊ မကောင်းဘူးလားဆိုတာ ကိုခက်ထန်နဲ့ ကိုခက်ထန်ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် အသိဆုံးပါ။ အဲဒီ မိမိလုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွနိုပ်တို့ရဲ့
တမန်တော် မုဟမ္မဒ် သခင် (Peace Be Upon Him) က “ အလုပ်ဟူသမျှသည် ရည်စူးချက် အပေါ်၌သာ မူတည်သည်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပြီး ကိုယ့်ရည်စူးချက်အတိုင်း အကျိုးပေးမယ့်အကြောင်းကို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား အသိဥာဏ်အလင်း ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျား ….. ။
—– ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ယုံကြည်သက်ဝင်မှကိုးကွယ်ခိုင်းတာပါ။ ပလီမှာ ကုလားတိုင်း ကိုရမ် ကိုင်ခွင့်မရပါ။ ကိုင်ခွင့်ရလို့ လေ့လာမယ်ဆိုလဲ ဆရာကိုယ်တိုင်က မရှင်းပြတတ်ပါ။ ဒီတော့ ဘာမှန်းမသိ ယောင်ဝါးဝါးကိုသာ ဘုရားရှင်ကယ်တင်နိုးနဲ့ စိတ်ကူးတည်ရာလုပ်နေသောသူများ လို့ သာမြင်မိပါသည်။ တကယ်လို့ များ ကိုရမ်ကို အစ/အဆုံးလဲ လေ့လာတယ်…ကျမ်းပါအတိုင်းလဲ ၁၀၀% လိုက်နာစောင့်ထိန်းတဲ့ ပလီဆရာဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖက်ကို လက်ခံသူ အားပေးသူလို့ သတ်မှတ်လို့ ရပါသည်။ သူ့ ကို လူသတ်မှုဖြစ်အောင်ကြံစည်သူ အကြမ်းဖက် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေသူအဖြစ်တောင် အရေးယူရမလို့ ဖြစ်နေပါပြီ။ —–
ဖြေ ။ ။ ကျနော် အထက်မှာ မေးမြန်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒီ စာပိုဒ်က စာသားတွေမှာလည်း ကိုခက်ထက်ရဲ့ အသိဥာဏ် နည်းပါးမှုတွေကို ထပ်မံ တွေ့ရှိရသည့် အပြင် ကုရ်အာန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုခက်ထန် တစ်လုံးတစ်လေမှ ကောင်းစွာနားမလည်၊ သူများပြောတိုင်း အဟုတ်ထင်ထားတယ်ဆိုတာ ထပ်မံ သိရှိလိုက်ရပါတယ်။ ကုရ်အာန်ကို ၁၀၀% လက်ခံတဲ့လူကို အကြမ်းဖက်သူ၊ လူသတ်မှု ဖြစ်အောင် ကြံစည်တဲ့သူ၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်အောင်ဆောင်ရွယက်သူ အဖြစ် ကုရ်အာန်ရဲ့ ဘယ်အကြောင်းအရာ၊ ဘယ်နေရာကို လေ့လာမိပြီး ပြောသလဲဆိုတာ အညွှန်းလေး ပေးပါလားခင်ဗျာ။
—– မွတ်ဆလင် ၁၀၀ မှာ ၉၀ လောက်က သူတို့ ကိုရမ်ဆိုတာ ဘာဆိုတာတောင် မသိဘဲ လက်ခံတာ အံသြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ စစ်မှန်တဲ့ မြတ်သာသနာနဲ့ တွေ့ တာ ကံကောင်းပါတယ်ဗျာ။ —–
ဖြေ ။ ။ ကိုခက်ထန်ရေ …. ဒီနေရာမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ဥာဏ်တိမ်မှုကို ထပ်မံ တွေ့လိုက်ရပြန်ပြီ၊ လူ ၁၀၀ မှာ ၉၀ က ကုရ်အာန်ဆိုတာ ဘာဆိုတာ မသိဘဲနဲ့ လက်ခံတယ်ဆိုတာ ဘယ်အရာကို ခင်ဗျား မြင်ပြီး ပြောတာလဲခင်ဗျာ။ နားလည်မှုပိုင်း၊ မေးမြန်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားကို အထက်မှာ ကျနော် ရှင်းပြထားပြီးပါပြီ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အကိုတို့ မြန်မာတွေ စစ်မှန်တဲ့ မြတ်သာသနာနဲ့တွေ့တာ ကံကောင်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီ မြတ်သာသနာကို အရောင်ညိုးနွမ်းအောင်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို လက်ခံလဲဆိုတာရယ်၊ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို သိက္ခာချနေတဲ့ သင်္ဃန်းခြုံတွေကို ကိုခက်ထန်အနေနဲ့ ဘယ်လို သဘောထားလဲဆိုတာ သိပါရစေ၊ သင်္ဃန်းခြုံထားပြီး အမှားများစွာ ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကို ကိုခက်ထန်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အမှားထောက်ခွင့်ရှိလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာ သိခွင့်ရှိပါရစေခင်ဗျား။
ကျနော်တို့ အစ္စလာမ် သာသနာမှာ မိန့်ထားတဲ့ အမိန့်တစ်ခုကို ပြောပြပါ့မယ်။ အမှန်တရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားတဲ့သူဟာ လူမည်းလူတန်းစား ပင် ဖြစ်ပါစေ အဲဒီလူရဲ့ စကားကို လက်ခံရမယ် ဆိုတာ အစ္စလာမ် သာသနာရဲ့ အဆုံးအမပါ။ အဲဒီအမှန်တရားကို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်း လက်ခံရမယ်လို့ မိန့်ထားပါတယ် ခင်ဗျား။
မှတ်ချက် ။ ။ ဤပို့စ်အောက်တွင် မိုက်ရိုင်းသော အသုံးအနှုန်းများ သုံးနှုန်း၍ ကွန်မင့်
ပေးသူ မည်သူကိုမဆို Block လုပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
Monirul islam Says:
March 15, 2014 at 4:04 pm | Reply
Oh! Nation of muslim ,oh! nation of Quran where you are ???
March 15, 2014 at 4:09 pm | Reply
Oh ! nation of muslim , Oh! Nation of Quran where you are ???
LeaveaReply to Monirul islam Cancel reply